दिउँसो सुत्ने बानी फाइदा कि बेफाइदा ? |
गृह पृष्‍ठ खबर दिउँसो सुत्ने बानी फाइदा कि बेफाइदा ?
दिउँसो सुत्ने बानी फाइदा कि बेफाइदा ?
प्रकाशित मिति : २०७७ आश्विन १४ , बुधबार ०८:२९
असोज १३ ई साझाकुरा
कोरोना भय र लकाउनको कारण अधिकांश घरभित्रै खुम्चिए । घरभित्र बस्दा के गर्ने रु कामधन्दाको मेलोमेसो नपाएकाहरुलाई समय कटाउन गाह्रो भयो । भान्साको काम गर्ने कि ? बगैंचामा रमाउने र बालबच्चासँग खेल्ने ? विकल्प अनेक हुनसक्थ्यो । तर, सधैभरी मुड हुँदैन । यस्तो अवस्थामा समय कटाउने बाहाना बन्छ, बेपर्वाह सुत्ने ।
त्यसो त कतिपय सुत्न रुचाउने नै हुन्छन् । फुर्सद पाउनसाथ मस्त निदाउँछन् । उनीहरुका लागि लकडाउनमा समय कटाउन अरु के गर्नुप¥यो रु मस्त सुते भयो ।
पछील्लो पोस्ट अल्सरको पीडाले पिरोलेको छ ?
अगिल्लो पोस्ट आईपीएल : हैदरावादले दिल्लीलाई १५ रनले हरायो
जसपा कपिलवस्तुले शुक्रबार तौलिहवामा विरोध प्रर्दशन गर्ने